मन पराएको केटीले अर्कैसँग बिहे गरेपछि डाक्टरद्वारा झण्डै ज्यान फालेनन्! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मन पराएको केटीले अर्कैसँग बिहे गरेपछि डाक्टरद्वारा झण्डै ज्यान फालेनन्!
काठमाडाैँ । मन परेको केटीको अर्कैसँग विवाह भएपछि एक जना डाक्टरले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् । ललितपुरको इमाडोलमा मन पराएकी केटीको अर्कै युवकसँग भएपछि डाक्टरले आत्महत्याको प्रयास गरेका हुन् ।
ती डाक्टर ललितपुर ग्वार्कोस्थित किष्ट अस्पतालमा कार्यरत रहेको प्रहरीले जनाएको छ । डाक्टरले मंगलबार विवाह भएकी युवतीसँग एकतर्फी प्रेम गरेको र उनको विवाहकै कारण उनले आत्महत्याको प्रयास गरेको बताइएको छ ।
उनले औषधि खाएका थिए । औषधि खानुअघि उनले सुसाइड नोट सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । प्रहरीले त्यो नोट पाएपछि उनको उद्धार गरेको हो । प्रहरीले किष्ट अस्पतालमा पुगेर उनको कोठा पत्ता लगाएको थियो । कोठमा उनी बेहोस अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
एमबिबिएस सक्काएका २९ वर्षीय ती डाक्टरले एमडी गर्ने तयारी गरेको समेत खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
सन्दिप लामिछाने कोरोनामुक्त
काठमाडाैँ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन् । उनले आफू कोरोनाबाट मुक्त भएको आज सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने तयारीमा रहेका लामिछाने कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका थिए । पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएसँगै उनि सेल्फ आइसोलेशनमा बसेका थिए ।
आइतबार श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि लामिछानेलाई ह्याम्स अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । केही दिनको आरामपछि उनि बिग बास लिग खेल्न अष्ट्रेलिया जानेछन् ।
अष्ट्रेलियामा यही डिसेम्बर तेस्रो सातादेखि बिग बास लिग शुरु हुँदैछ । उनि तेस्रोपटक बिग ब्यास लिग खेल्ने तयारीमा छन् । यसपटक लामिछानेले होबार्ट हुरिकेन्सबाट बिग बास खेल्दैछन् ।